Echeghị m na ire ahia bụ ịkpata ego | Martech Zone
Ọ bụrụ na enwere mkpụrụ okwu abụọ m hụrụ n’ụlọ ọrụ a na-eme m ịsụ ude wee pụọ, ọ bụ ahịrịokwu ahụ na-eme ka ego. Achọghị m ka m banye na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke na-adịbeghị anya, ma a ụlọ ọrụ mere mkpebi ẹkedori a controversial ahịa mkpọsa. Otu n'ime ndị ọrụ ibe m kwuru na ọ bụ amamiihe ahịa n'ihi na ọ ga-eme ka ha nwee ego.
Lee, ha bụ ụlọ ọrụ ma nwee ike ịme ihe ọ bụla masịrị ha na ahịa ha. Jumpbanye na esemokwu a ma ama nwere ike ịbụ ihe dị mma maka nku anya na ọbụlagodi akara ngosi dollar. Mana ekwetaghị m na ebumnuche nke ịzụ ahịa bụ ịkpata ego. Arụrụ m ọtụtụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ego, ha na-ata ahụhụ ma ọ bụ nwụọ - n'ihi na ịme ego bụ usoro kachasị mkpa.
Newspapers - Arụrụ m ọrụ maka akwụkwọ akụkọ nke nwere naanị ihe gbasara mgbasa ozi ma gaa n'ihu na-eme ka ọnụego ha dị elu. Akụkọ ahụ ghọrọ "njupụta n'etiti mgbasa ozi". Mgbe asọmpi bịara n'ịntanetị, ndị ahịa na ndị mgbasa ozi enweghị ike ichere ịwụli ụgbọ mmiri.
SaaS - Arụrụ m ụfọdụ n'ime sọftụwia kachasị ukwuu dịka ndị na-eweta ọrụ na ụlọ ọrụ. N'ime ịnụ ọkụ n'obi ha iji merie ihe mgbaru ọsọ ahụ n'akụkụ ọ bụla, m na-ele ha ka ha na-eme ka ndị ahịa na-eme ihere ma na-agba ha ọsọ maka onye ahịa ọzọ dị mkpa. Mgbe ndi bidoro ulo oru ihe ha gha abia, ndi ahia ochie azaghi ekwenti. Na mgbe achọtara azịza ọhụụ, ndị ahịa echefuru akwaga.
Inweta ego bụ ebumnuche dị mkpirikpi nke na-ewepụ anya n'ihe niile dị mkpa iji wuo azụmaahịa na-aga nke ọma. Ego bụ ihe gbanwere n'etiti ụlọ ọrụ na ndị ahịa ya maka uru ha na-eweta. Ego dị oke egwu - na-akwụ ụgwọ nke ukwuu na onye ahịa gị nwere ike iche na ọ ga-adọka ma pụọ. Ọ bụrụ n’ịkwụghị ụgwọ zuru oke, ị gaghị enwe ike ịkwụ ụgwọ ijere onye ahịa ahụ ozi nke ọma. Ego bụ mgbanwe variable mana iwulite mmekọrịta siri ike bụ ihe dị oke egwu.
Ire ahia n’ere ahia site n’inwa ichota, ichoputa, na iche ndi n’azu ahia aka mkpa ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị nke ahụ dị ka ndị ahịa gị kachasị mma. Kwa izu m na-ahapụ azụmahịa ebe m na-ekweghị na m a kwesịrị ekwesị na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ. Companiesfọdụ ụlọ ọrụ ọbụna na-ewe iwe na agaghị m enyere ha aka - mana amaara m na ebumnuche dị mkpirikpi nke na-eme ka ego ọ fọrọ nke nta ka mbibi azụmahịa m n'oge gara aga. Mgbe m chọtara ndị ahịa ziri ezi, jiri ndidi chere iji soro ha rụọ ọrụ, setịpụ atụmanya kwesịrị ekwesị, ma mesie m obi ike na ha chọrọ ma chọọ ngwaahịa na ọrụ m… nke ahụ bụ mgbe anyị wuru mmekọrịta.
Ka m tinye ihe atụ ole na ole n'ebe ahụ:
Ana m enyere a ego ụlọ ọrụ nke na-arụ ọrụ na ụlọ akwụkwọ ugbu a. Ha enweela ọganihu dị egwu na afọ ole na ole gara aga na m na-enyere ha aka - mana ọ bụ n'ihi na ha lekwasịrị anya nke ọma ndị ụlọ akwụkwọ kwesịrị ekwesị ga-arụ ọrụ. Ha na-ezere ịrụ ọrụ n'ụlọ akwụkwọ ebe ngwaahịa ha nwere ike ịkpata esemokwu n'etiti ụmụ akwụkwọ…, kama nke ahụ, ha na-akwado ụlọ akwụkwọ ndị ahụ site na enyemaka ha. Hà nwere ike ịkpata ego site n’ire ha? N'ezie… mana ha ma na ọ bụghị maka ọdịmma ụlọ akwụkwọ.
Ana m enyere a ụlọ ọrụ data data onye ohuru na onwe ya. Ha nwere ike ime ego site na ire obere nkwa na afọ niile… ha na-aba uru karịa na obere oge. Agbanyeghị, ha maara na nnukwu, ndị ahịa azụmaahịa nwere nsogbu ịma aka bụ ebe ha na-enwu. Yabụ, ha na-ere ahịa nye nnukwu azụmaahịa ma na-ezere ịzụ ahịa na obere ụlọ ọrụ.
Ana m enyere a ọrụ ụlọ azụmahịa nke na-eme elu ụlọ, siding, na ọrụ ndị ọzọ dị na mpụga. Ha bụ azụmahịa ezinụlọ nke nọruworo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 50 na obodo. Asọmpi ha na-ekwe nkwa ma na-ahapụ ụzọ dị egwu site na iji ahịa dị arọ na ịkwanye onye ahịa ọ bụla nso ma ọ bụ na-ewute ya. Onye ahịa m na-ahọrọ ịhapụ ndị ọrụ ahụ, kama, na-ere ndị enyi, ezinụlọ, na ndị agbata obi nke ndị ahịa ha.
Ana m enyere a nnwale mmiri azụmahịa nke ebumnuche mbụ ya bụ inyere ndị na-azụ ahịa aka ịnwale ogo mmiri ha na ngwa ụlọ. Agbanyeghị, ha gosipụtara nsogbu ka ukwuu ebe ndị obodo na-enweghị sọftụwia nsuso iji rube isi n'iwu mpaghara, steeti na gọọmentị etiti. Ha maara na ha nwere ike inwe mmetụta dị ukwuu karị na ebumnuche ha nke inye aka ịgbanwe oke mmiri na mba ahụ ma ọ bụrụ na ha na-atụgharị uche ma na-elekwasị anya ogologo oge na nkwekọrịta gọọmentị.
N'okwu ndị a niile, anyị anaghị ele anya -eme ka ego. Mgbalị ahịa anyị bụ ịkwalite na dakọtara ngwaahịa na ọrụ nke azụmaahịa anyị na-enyere ndị ahịa nwere ike ijere ozi aka. All ndị a ụlọ ọrụ nwere oké ibu, ma ọ bụ n'ihi na ha maara mgbe ha nwere na-atụgharị si na-akpata ego… ọ bụghị na-eso ya.
Ahịa ọ bụla nwere ike inyere ụlọ ọrụ aka -eme ka ego. Ndị ahịa ole na ole na-enyere ndị azụmaahịa aka ito ma na-eto n'etiti ndị ahịa nwere ekele maka ngwaahịa na ọrụ ha. N'ime afọ iri gara aga na azụmaahịa m, achọpụtara m na ego na-abịa n'ezie site n'ịchọ na isoro ndị ahịa ziri ezi na-arụ ọrụ. Ahịa m bụ ịchọta ụlọ ọrụ ndị ahụ, ọ bụghị ịchọ ma nweta ego. Enwere m olileanya na nke ahụ bụ uche gị.
Tags: na-eme ka egomarketingego